မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ကိုယ်စားမဲလာရောက်ပေးသူနှစ်ဦးကို အမှုဖွင့် - People Media Myanmar
Home မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ကိုယ်စားမဲလာရောက်ပေးသူနှစ်ဦးကို အမှုဖွင့်
မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ကိုယ်စားမဲလာရောက်ပေးသူနှစ်ဦးကို အမှုဖွင့်
မိုးကောင်း၊ နိုဝင်ဘာလ ၈
မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်စား မဲလာရောက်ပေးသူကို ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း နမ္မတီးနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ နမ္မတီးမြို့မြို့မရပ်ကွက် အမက(သစ္စာ)မဲရုံအမှတ်(၂၀)တွင် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်ခန့်က အဒေါ်တော်စပ်သူ နေမကောင်းကျန်းမာ၍ ကိုယ်စားလာပေးသူ မ…, (၁၆)နှစ်(၉)လမှ ကိုယ်စားလာရောက်မဲပေးရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆန္ဒမဲပုံးများကိုပေးခဲ့ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဲပုံးကို မဲထည့်မည်ပြုစဉ် အဆိုပါ နေရာ၌ တာဝန်ကျသူမှ မသင်္ကာသဖြင့် မဲရုံရပ်/ကျေးဥက္ကဋ္ဌကို အကြောင်းကြား၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ ယခု ကဲ့သို့ အရေးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ဆားမှော်ကျေးရွာ၊ အောင်သိရိရပ်ကွက် အ.ထ.က ဆားမှော် မဲရုံအမှတ်(၅၀) တွင်လည်း မ…….(၁၇)နှစ်သည်လည်း အစ်မဖြစ်သူအတွက် ကိုယ်စားလာပေးသည်ဟုဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါနှစ်ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
မိုးကောငျးမွို့နယျ၌ ကိုယျစားမဲလာရောကျပေးသူနှဈဦးကို အမှုဖှငျ့
မိုးကောငျး၊ နိုဝငျဘာလ ၈
မိုးကောငျးမွို့နယျတှငျ မဲဆန်ဒရှငျကိုယျစား မဲလာရောကျပေးသူကို ရှေးကောကျပှဲဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူ ထားကွောငျး နမ်မတီးနယျမွရေဲစခနျးမှ သိရသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ၊ မိုးကောငျးမွို့နယျ၊ နမ်မတီးမွို့မွို့မရပျကှကျ အမက(သစ်စာ)မဲရုံအမှတျ(၂၀)တှငျ နိုဝငျဘာလ (၈)ရကျ နံနကျ(၁၀)နာရီအခြိနျခနျ့က အဒျေါတျောစပျသူ နမေကောငျးကနျြးမာ၍ ကိုယျစားလာပေးသူ မ…, (၁၆)နှဈ(၉)လမှ ကိုယျစားလာရောကျမဲပေးရာ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျနှငျ့ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျဆန်ဒမဲပုံးမြားကိုပေးခဲ့ပွီး ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျမဲပုံးကို မဲထညျ့မညျပွုစဉျ အဆိုပါ နရော၌ တာဝနျကသြူမှ မသင်ျကာသဖွငျ့ မဲရုံရပျ/ကြေးဥက်ကဋ်ဌကို အကွောငျးကွား၍ စဈဆေးမေးမွနျးရာ ယခု ကဲ့သို့ အရေးယူခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အလားတူ မိုးကောငျးမွို့နယျ၊ ဆားမှျောကြေးရှာ၊ အောငျသိရိရပျကှကျ အ.ထ.က ဆားမှျော မဲရုံအမှတျ(၅၀) တှငျလညျး မ…….(၁၇)နှဈသညျလညျး အဈမဖွဈသူအတှကျ ကိုယျစားလာပေးသညျဟုဆိုကာ သကျဆိုငျရာ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျးသိရသညျ။
ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အဆိုပါနှဈဦးကို ရှေးကောကျပှဲဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူရနျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။
« နယ်စပ်ဒေသများ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး ထိန်းသိမ်းရန် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ် သဘောတူ
ဟိုပင်မြို့တွင် ကိုယ်စားမဲလာပေးသူတစ်ဦးကို အရေးယူ »